क्यान्भामा युट्यूबको लागि थम्बनेलहरू कसरी बनाउने क्रिएटिव अनलाइन
क्यान्भामा युट्यूबको लागि थम्बनेलहरू कसरी बनाउने
लोला करील | | मा अद्यावधिक गरियो 01/07/2021 09:52 | सामान्य, ट्यूटोरियलहरू
भिडियोको थम्बनेलहरू महत्त्वपूर्ण हुन्छन्, अन्तमा हामीले हेर्ने पहिलो चीज हो र धेरै जसो केसहरूमा हामी निर्णय गर्छौं कि यदि सामग्रीले हाम्रो चासो राख्छ वा त्यो सानो छविमा हामीले देखेको कुराको आधारमा होईन, त्यसैले किन ध्यान दिनु महत्त्वपूर्ण छ। यसको डिजाइन को। यस पोष्टमा हामी तपाईंलाई क्यान्भामा युट्युबका लागि थम्बनेलहरू कसरी बनाउने भनेर देखाउँदछौं र हामी तपाइँलाई तपाइँको सिर्जनामा ​​लागू गर्न केहि विचार दिन्छौं। यदि तपाईं यो उपकरण ह्यान्डल गर्नुहुन्न भने चिन्ता नलिनुहोस्, तपाईको सानो बनाउँदा तपाईलाई कुनै समस्या हुने छैन किनकि यो प्रयोग गर्न धेरै नै सजिलो छ, म तपाईंलाई यहाँ छोड्दैछु परिचय क्यान्भा ट्यूटोरियल तपाइँ समात्न को लागी।
1 नयाँ कागजात सिर्जना गर्नुहोस्
2 पृष्ठभूमि रंग परिमार्जन गर्नुहोस्
3 क्यान्भा मा युट्यूब को लागी एक आकर्षक थम्बनेल डिजाइन
4 पारदर्शी पृष्ठभूमिको साथ एक PNG छवि जोड्नुहोस्
5 तपाइँको YouTube थम्बनेलमा वर्णनात्मक र ध्यान-लिने शीर्षक थप्नुहोस्
6 अधिक दृश्य सामग्री थप गर्नुहोस्
नयाँ कागजात सिर्जना गर्नुहोस्
हामी कागजात सिर्जना गरेर सुरु गर्नेछौं जसमा हामी हाम्रो लघुचित्र डिजाइन गर्न गइरहेका छौं, त्यसका लागि "फाइल" मा जानुहोस्, "नयाँ डिजाइन सिर्जना गर्नुहोस्"। क्यान्भाले तपाईंलाई मद्दत गर्दछ जब प्रत्येक टुक्राहरूको लागि उपयुक्त आयामहरू कुन निर्णय गर्ने हो, तपाईंले केवल खोजी पट्टीमा जानुपर्नेछ र तपाईं के डिजाइन गर्न चाहानुहुन्छ लेख्नु पर्छ। क्यान्भाले तपाईंलाई बिभिन्न टेम्प्लेटहरू देखाउँदछ र तपाईंलाई दिनेछ खाली कागजातमा काम गर्ने सम्भावना। लघुचित्रहरु को मामला मा, सिफारिश गरिएको वेब आकार १२1280०px x p२० px हो।
पृष्ठभूमि रंग परिमार्जन गर्नुहोस्
जब तपाईं फाईल सिर्जना गर्नुहुन्छ, पृष्ठभूमि रंग परिवर्तन गर्नुहोस्। तपाईंले भर्खर पानामा क्लिक गर्नुपर्नेछ, र रंगीन वर्ग थिच्नुहोस् त्यो शीर्ष फोटोको बाँया कुनामा देखा पर्दछ। रंग विकल्पहरू सहितको प्यानल खुल्नेछ। यदि तपाईंसँग एक लोगो छ, तपाईं यसको सही रंग प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ यदि तपाईंले कोड राख्नुभएन भने पनि। यसको लागी स्क्रिनमा तपाइँको लोगो फाइल तान्नुहोस्, यो क्यान्भामा सिधा अपलोड हुनेछ। जब तपाईं यसलाई फाईलमा थप्नुहुन्छ, रंग विकल्प प्यानलमा फिर्ता जानुहोस् र तपाईं त्यहाँ नयाँ सेक्सन देख्नुहुनेछ, "फोटोहरूको र Color्ग प्यालेट", त्यहाँ तपाईंसँग तपाईंको लोगोका सबै र colorsहरू उपलब्ध छन्। जब तपाईं तिनीहरूलाई प्रयोग गर्नुहुन्छ वा कोडहरू लेख्नुहुन्छ तपाईं छवि हटाउन सक्नुहुन्छ।
क्यान्भा मा युट्यूब को लागी एक आकर्षक थम्बनेल डिजाइन
यी निर्देशनहरू जुन हामी तपाईंलाई अब युट्युबका लागि थम्बनेलहरू कसरी बनाउने भनेर दिने छौं, ट्यूटोरियलमा आधारित छन्। यो केवल एक उदाहरण हो जुन प्रेरणाको रूपमा काम गर्न सक्दछ, तर पक्कै पनि तपाईं आफ्नो रचनात्मक उडान गर्न र अधिक व्यक्तिगत डिजाइन बनाउन सक्नुहुन्छ। केवल यसलाई आकर्षक बनाउने प्रयास गर्नुहोस् सानो सूक्ष्म दृश्य धेरै आकर्षक छ ताकि अरूहरु तपाइँको भिडियो मा रुचि छ।
पारदर्शी पृष्ठभूमिको साथ एक PNG छवि जोड्नुहोस्
फोटोग्राफ ध्यान आकर्षण गर्न मद्दत गर्दछ। यदि तपाईं एक हुनुहुन्छ जो भिडियोमा बोल्नुहुन्छ, eयो एउटा राम्रो विचार हो एउटा रोचक फ्रेमको स्न्यापशट लिन र थम्बनेलमा छवि प्रयोग गर्नुहोस्। यहाँ, उदाहरण को लागी, हामी बाट एक भिडियो को एक स्क्रीनशट को उपयोग गर्न जाँदैछौं हाम्रो युट्यूब च्यानल.
हामी छविबाट पृष्ठभूमि हटाउने छौं ताकि परिणाम इष्टतम हो। यदि तपाइँ यसलाई कसरी गर्ने थाहा छैन भने, म तपाईंलाई सिफारिश गर्दछु कि यो ट्यूटोरियल हेर्नुहोस् जसमा हामी तपाइँलाई कसरी सिर्जना गर्ने भनेर सिकाउँछौं फोटोशपमा PNG छविहरू। जे भए पनि, यदि तपाईले एडोब प्याकेजलाई पनि चलाउनु भएन त्यहाँ अनलाइन उपकरणहरू छन् त्यो स्वचालित रूपमा पृष्ठभूमि मेटाउँछ।
जब तपाईं आफ्नो तस्वीर तयार छ, यसलाई क्यान्भामा अपलोड गर्नुहोस् र टाँस्नुहोस्। यदि तपाइँ छविमा क्लिक गर्नुहुन्छ भने, स्क्रिनको शीर्षमा, तपाईंसँग विकल्प "प्रभाव" छ, तपाईं कुनै पनि उपलब्ध प्रभावहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ छविलाई भोल्यूम दिनका लागि, हामी लागू गरेका छौं "छायाँ" सेक्सनमा "वक्र".
तपाइँको YouTube थम्बनेलमा वर्णनात्मक र ध्यान-लिने शीर्षक थप्नुहोस्
अर्को कुरा हामी थम्बनेलमा थप्नेछौं पाठ हो। सँधै वर्णनात्मक, छोटो र ध्यान हार्ने शीर्षक थप्न कोसिस गर्नुहोस्। ट्यूटोरियलमामैले एउटा युक्ति प्रयोग गरेको छु सरल, तर धेरै प्रभावी।
"तत्वहरू" मा जानुहोस् र एक वर्ग आकार फेला पार्नुहोस्। हामी यसलाई माथिल्लो बायाँ कुनामा राख्नेछौं र हामी आयतमा परिवर्तन हुनेछौंवा हामी रंग पनि परिवर्तन गर्नेछौं, त्यसमा क्लिक गर्नुहोस् र माथिल्लो प्यानलमा उपलब्ध र square्ग स्क्वेअर थिच्नुहोस्। यु एस हामीले यसलाई धेरै गाढा खैरो टोन दिएका छौं.
जब तपाईंसँग फारम छ "पाठ" मा जानुहोस् र एक शीर्षक जोड्नुहोस्। हामीले रालेवे भारी फन्ट प्रयोग गरेका छौं, तर तपाईले चाहानु भएको एउटा छनौट गर्न सक्नुहुन्छ, यो स्वादको कुरा हो। शीर्षक लेख्नुहोस्, पृष्ठभूमि रंग दिनुहोस्, र पुन: आकार आयताकार फिट गर्न पाठ आकृतिमा खोपिएको खोक्रो जस्तै देखिनेछ!
तपाईं तल अधिक पाठ थप्न सक्नुहुन्छ, सँधै पढ्न योग्यको लागि प्रयास गर्दै र क्रमबद्ध राम्रोसँग बुझिएको छ। बिभिन्न रंगहरूलाई मिलाउन प्रयास गर्नुहोस्।
अधिक दृश्य सामग्री थप गर्नुहोस्
तपाईं दृश्य तत्वहरू थप्न सक्नुहुन्छ जुन भिडियोको विषय बुझ्न सहयोग गर्दछ। यस अवस्थामा ट्यूटोरियल "क्यान्भामा युट्युबका लागि थम्बनेलहरू कसरी बनाउने" भन्ने छ, हामी हामी "एलिमेन्ट्स" मा गयौं र हामीले यूट्यूब लोगो खोज्यौं। यसलाई थप गरेर हामीले "चम्किलो" प्रभाव, "छायाँ" सेक्सनमा लागू गरेका छौं. बचत गर्न र YouTube मा तपाईंको थम्बनेल अपलोड गर्नु अघि सुनिश्चित गर्नुहोस् कि सबै तत्वहरू राम्रोसँग पigned्क्तिबद्ध छन्।
लेखको पूर्ण मार्ग: अनलाइन रचनात्मक » सामान्य » ट्यूटोरियलहरू » क्यान्भामा युट्यूबको लागि थम्बनेलहरू कसरी बनाउने
यो कुन स्रोत हो? Tools उपकरणहरू फन्टहरू अनलाइन पहिचान गर्न